sanctioned နဲ့ အိုင်တီ — MYSTERY ZILLION
sanctioned နဲ့ အိုင်တီ
OFAC Sanctions Programs SDN List Abbreviation Program Last Updated:
Counter Narcotics Trafficking Sanctions [SDNT] ; [SDNTK] 02/24/2011
Counter Terrorism Sanctions [SDGT] ; [FTO] ; [SDT] 02/24/2011
Iran Sanctions [IRAN] ; [IRGC] ; [IFSR] ; [IRAN-HR] 02/23/2011
Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions [LIBERIA] 12/14/2010
Libya Sanctions [LIBYA2] 03/04/2011
Non-Proliferation Sanctions [NPWMD] 02/23/2011
North Korea Sanctions [NORTH KOREA] ; [DPRK] 02/09/2011
Zimbabwe Sanctions [ZIMBABWE] 12/21/2010
အပေါ်က ဟာတွေ က US sanctioned စာရင်းပါ .
မြန်မာအိုင်တီ သမား တွေ အတွက် ဘာတွေ ထိခိုက်သလဲ . ..
အောက်က စာလေးကို ဖတ်ပါ ..
As of 05-Mar-2011 oDesk has suspended your account "mgmg".
Comment from oDesk Support: Our system detected your location as Myanmar and we will need to see ID to prove your citizenship.
Per United States law, we are required to prevent users located in OFAC sanctioned countries, such as Myanmar, from doing business on oDesk.
မြန်မာ freelancer မှန်သမျှကို freelance လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ဟာပါ . .
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် profile မှာ country ပြောင်းပြီး လျှောက်လဲ ခဏတော့ ရပါတယ် တကယ်တမ်းငွေ၀င်လာတဲ့ အခါ လုံး၀ မလွဲပေးပါ ခင်ဗျား. .
sanctioned နဲ့ အိုင်တီ ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး ဗျ ရှင်းပြပေးဦး ကိုအီမို
sanctioned ဆိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အနောက်နိုင်ငံကနေ ဝယ်ယူခွင့်တွေ ပိတ်ပင်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ hosting ကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဝယ်ယူခွင့်မရတာတွေ ကြုံဖူးတယ်။ နောက်ပြီး template ဝယ်ဖို့ လုပ်တုန်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံဆို မရောင်းဘူး။ sanctioned ကြောင့်ဆိုပြီး ပြောတာတွေ ခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တော့ ဘာ ဝယ်ချင်ချင် စလုံးက လိပ်စာ စလုံး နိုင်ငံ ကနေ ဝယ်မှပဲ တော်တော်များများ အဆင်ပြေတော့တယ်။
ဟုတ်မယ်အစ်ကို .. အရင် ကျွန်တော်. http://www.freehostingcloud.com မှာ Hosting ယူတုန်းက ( အဲ့တုန်ကတော့ သူတို့စလုပ်တာ မကြာသေးဘူးထင်တာပဲ ) Myanmar နိုင်ငံနဲ့ယူလို့ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးလလောက်က Server Down ပြီးကတည်းက Account Create ထပ်လုပ်ရင် Myanmar နဲ့ Japan မပါတော့တာ သတိထားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ Account ကတော့သုံးလို့ရနေတုန်းပဲ။ Free Order မှာလဲတန်းရတယ်။ နောက်ဆိုရင်တော့ ဘာပဲလုပ်လုပ် စ လုံးက တစ်ယောက်ယောက်ကိုအကူအညီတောင်းရတော့မယ်ထင်တာပဲ. :rolleyes::rolleyes:
T.K ရေ အဲဒါ sanction ကြောင့်ထက်စာရင် တို ့နိုင်ငံကလူတွေက free order အယူများတယ်လို ့ပဲထင်တာပဲ။ ဆန်ရှင်ကြောင့်ဆိုရင် အစောကြီးကတည်းက ပိတ်မယ်ထင်တယ်။ ဒါက ကျွန်တော်အမြင်ပါ။
သို ့သော် ဒီကလူတွေ free order အယူများတာလည်းအပြစ်တင်လို ့မရပါဘူး။ ၀ယ်စရာ အကောင့်တွေက ဆန်ရှင်လုပ်ထားတာကိုး။ သွယ်၀ုိက်ဆန်ရှင်ကြောင့်လို ့ယူဆတာပါပဲ။
အင်း .. ဟုတ်တယ်
အဲ့ဒီအချက်လည်း ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်။ :redface::redface: